A Conversation Between Young Loving Couple | NAJ Entertainment
Home Story A Conversation Between Young Loving Couple
This article shows the reality of today’s generation. Howacouple will go through in their daily life and the things they must know inarelationship. Even though we ensure this article doesn’t contain vulgar/vulgarism or sensational content, but only the peoples of 18 years old or more than that are requested to read this article.
केहिदिनपछी एकदिन उसले फोन गरेर उसको घरैमा बोलाइ। उसले बोलाएपछी म नजाने कुरै थिएन। म हतारहतार नुवाइँधुवाइँ गरेर सकेसम्म चिटिक्क परेर उसको घरमा पुगेँ। उसको घरमा त्यो दिन ऊ एक्लै थिइ। म पुग्ने बित्तिकै ऊ बरण्डामा निस्किएर मिठो मुस्कानको साथ स्वागत गरि उसले। म पनि मुस्कुराउँदै भित्र पसेँ। मलाइ उसले सोफामा बसाइ अनि चियाको लागी सोधी। मैले ‘चिया पिउँदिन’ भनेर जवाफ फर्काएँ।
उसले केहि जवाफ दिइन। मेरो ढाडमा हात लगेर अंगालोमा अलिक कस्सिएर टाँसिइ। मैले बिस्तारै उसको टाउको सिधा गरेँ अनि मेरो अनुहार अगाडी ल्याएँ। उसको अनुहार लजाए झैँ भयो। उसका आँखा बन्द भए। मैले उसका ओठमा ओठ जोडाएँ। उसले कुनै प्रतिक्रीया दिइन। मैले मेरा हातहरुलाइ उसका कम्मरमा पुर्याएँ। अनि बिस्तारै मेरा ओठले उसका ओठहरुलाइ चलाउन थालेँ। केहिबेरमा उसका पनि ओठहरु चलमलाउन सुरु गरे।
मैले फेरि उसका ओठमा चुम्बन गरिदिएं। उसले मलाइ उसको शरिर सुम्पिदिइ। मैले बिस्तारै उसलाइ सोफामा पलटाएँ अनि उसको छातिमा छाती खप्टाएँ। हाम्रो सासको गति बढ्यो। मेरो छातिमा कोमल बस्तुको स्पर्शले काउकुती लागे झैँ भयो। म झनै बहकिन थालेँ। सायद उ पनि म संगै बहकिएकी थिइ। उसका हातहरु मेरा ढाडमा जोडले कसिँदै गए। बिस्तारै मैले मेरो हातलाइ उसको कम्मर हुँदै टिसर्टको भित्र पुर्याएँ। ऊ अलिकती बटारिइ तर मैले हात नहटाएपछी फेरि छोडिदिइ। उसको स्विकृती पाएपछी मेरो हात उसको कम्मर हुँदै छाती तिर लम्कन थाल्यो। उसको शरिरको तातोले म भित्र अनौठो सञ्चार पैदा हुँदै गयो। उसले आँखा बन्द गरेर नै सानो बच्चाले स्तनपान गरेझैँ मेरा ओठपान गरिरहि। मेरो हातलाइ उसको भित्री वस्त्रले रोक्न सकेन। मेरा हातले उसका ति कोमल बस्तुको स्पर्ष गरिछाडे। मैले त्यहाँ स्पर्श गर्दा ऊ यताउता बटारिइ। अनि झनै जोडले मलाइ आँफु तिर तान्न थाली। हामी दुबैको बढेको सासले कोठा नै गुन्जिन थालेको थियो। मेरो हात उसको छातिमा हतार हतार सलाबलाइ रह्यो धेरैबेर सम्म।
केहिबेरमा नै मैले उसलाइ निर्वस्त्र बनाएको थिएँ। उसको नाँगो पोटिलो छातीले मलाइ स्वागत गरिरहेको थियो। उसको बाटुलो कम्मर कुनै मुर्तिकारले कुँदेर बनाएको मुर्तिको झैँ लोभलाग्दो देखिएको थियो। उसको त्यो सफा अनि चिल्लो पेट उसले फेरेको सासको गति संगै तलमाथी गरिरहेको थियो। उसका ति सुन्दर खँदिला स्तनहरु मलाइ हेरेर सर्माए झैँ देखिएका थिए। उसले आफ्ना निर्वस्त्र तिग्राहरु एकआपसमा खप्ट्याएर लाज छोप्ने नाकाम कोशिस गरीरहेकि थिइ। उसका तिग्रामा भएका मसिना कैला रौँहरु अलिअली ठाडिदैँ गएका थिए। समग्रमा उसको शरिर कुनै चित्रकारले कोरेको कामुक चित्र झैँ देखिएको थियो।
बिस्तारै मेरा हात अनि ओठहरुले उसको सम्पुर्ण सरिरको स्पर्श गर्न थाले। ऊ आँखा बन्द गरेर लामो लामो सास फेर्दै छटपटाइ रहि। म उसको त्यो छटपटिमा झनै आनन्द लिइ रहेँ। केहिबेरमा म पनि निर्वस्त्र भएको थिएँ। मेरो नाँगो छाती उसका कोमल स्तनको तकिया लगाएर आराम गर्दै थियो। उसको बढ्दो सास संगै तलमाथी भइरहेको छातिले मलाइ अझै बढी रोमान्चित बनाइ रहेको थियो।
केहिबेरमा नै उसका हातहरुले बल लगाएर मलाइ भित्र प्रबेश गर्नका लागी आग्रह गर्न थालेका थिए। उसको आग्रह पस्चात मैले ढिला नगरी ऊ भित्रको त्यो स्वर्गिय प्रबेश द्वारबाट भित्र प्रबेश गरेको थिएँ। उसको अनौठो आनन्ददायी मसिनो चित्कारले कोठा गुन्जयमान भएको थियो।
क्केहिबेरमा उसले खाना तयार गरि अनि श्रीमतिले झैँ प्रेमपुर्बक खुवाइ। खाना खाएपछी म उसको घरबाट निस्किएँ।
Previous articleThe Doll And A White Rose | Inspiring Story
Next articleChromosomes And Sex Disorder | Article By Pranish Lamsal